‘कोर मधेस’का मतदाता भन्छन् – यहाँ कि एमाले छ कि कांग्रेस
४ कार्तिक २०७५, आइतवार | Oct 21, 2018 | 20:32:27
देवानगञ्ज (सुनसरी), कात्तिक २९ – सुनसरी कप्तानगञ्जका अरुण मेहता मधेस आन्दोलनमा सहभागी हुनुभयो । इनरुवाबाट २३ किलोमिटर दक्षिणका स्थानीय बासिन्दा मेहता आन्दोलनका बेला दिनहुँ जिल्ला सदरमुकाम इनरुवा आउनु भयो । नारा जुलुसमा सहभागी हुनुभयो त्यसपछि घर जानुभयो । अरुण मेहताको आन्दोलनमा सहभागी हुनुको उद्देश्य थियो, हेपिएका मधेसीहरुले अधिकार पाउलान् । राज्यका हरेक तहमा मधेसीको सहभागिता होला र मधेसमा विकास होला । मधेसी भनेर सधै हेप्ने काठमाडौंले हेप्न छाड्ला ।
तर पटक पटक भएको आन्दोलनपछि सत्तामा पुगेका मधेसवादी दल र तिनका नेताहरुले मधेसीका पक्षमा काम नगरेपछि उहाँ थप पीडामा हुनुहुन्छ । राज्यले मधेसी समुदायलाई विभेद गरेकोमा उहाँलाई चित्त बुझेको छैन । मधेसवादी दलहरुले नै मधेसीको अधिकार सुनिश्चित गर्छ भनेर मधेस आन्दोलनमा सहभागी हुनु भएका मेहतालाई मधेसी दलहरुले पछिल्ला वर्षहरुमा गरेको व्यबहार र देखाएको चरित्रप्रति आक्रोशित बनाएको छ ।
‘मधेसका नाममा राजनीति गर्ने अनि सत्ता र कुर्सीका लागि मरिहत्ते गर्ने ?’ मेहताले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँका अनुसार मधेसीका लागि एमाले र कांग्रेसले भन्दा पनि मधेसवादी दलहरुले नै बेइमानी गरे । अहिलेको सुनसरी क्षेत्र नं. २ का धेरै क्षेत्र तत्कालिन क्षेत्र नं. ३ मा पथ्र्यो । त्यहाँबाट पहिलो संविधानसभामा मधेसी जनअधिकार फोरमले चुनाव जित्यो । त्यहाँबाट कप्तानगञ्जकै मुगालाल मेहता सभासद हुनुभयो । अरुण मेहता भन्नु हुन्छ ‘आफैले विश्वास गरेका नेताहरुले नै हामीलाई धोका दिए ।’ २०७० सालको चुनावमा भने कांग्रेसका सिताराम मेहताले बाजी मार्नु भयो । मुगालालले भन्दा त सितारामले नै मधेसका लागि काम गरेपछि हामीले मानेका र छानेका नेताप्रति विश्वास छैन ।
सुनसरी देवानगञ्जका इन्द्रदेव कर्ण व्यापार गर्नुहुन्छ । उहाँलाई राजनीतिमा कुनै चासो छैन । तर मधेसी हुनुका नाताले मधेसका नागरिकको माग मधेसी पार्टीहरुले नै पूरा गर्लान् भन्ने लागेको थियो तर यथार्थमा त्यो भएन । मधेस आन्दोलनपछि भएको संविधानसभाको चुनावका बेला जसरी सुनसरीमा मधेसवादी दलहरुको प्रभुत्व थियो अहिले आएर सकिएको छ । किन त ? हाम्रोको जिज्ञासामा उहाँको तर्क थियो ‘मधेसका दलहरु सत्ता र स्वार्थका लागि नै लिप्त भए ।’
मधेसी नागरिकले गरेको आन्दोलन र बलिदानीको मधेसी दलहरुले वेवास्ता गरेको उहाँको आरोप छ । ‘मधेसका नागरिकका माग ठूला छैनन् । बाटो बनोस, बिजुली आओस र खेती किसानी गर्दा मल बिउ पाइयोस् । तर हाम्रा सामान्य आवश्यकता पूरा गर्न पनि मधेसी दलहरुले ध्यान दिएनन्’ उहाँले भन्नुभयो ‘चाहेको भए मधेसी दलहरुले मधेसको विकासमा धेरै गर्न सक्थे ।’
वितेका वर्ष मधेसी दलहरु नै सत्तामा पुगे । उहाँका अनुसार स्थानीय तहको चुनाव पनि सुनसरीको हरिनगरा गाउँपालिका, देवानगञ्ज गाउँपालिकामा मधेसी दलहरुको प्रभुत्व सकिएको छ । उहाँको भनाईलाई स्थानीय तहको चुनावले पनि पुष्टी गर्छ । हरिनगरा र देवानगञ्ज गाउँपालिका दुबैमा कांग्रेसले जित हासिलल गरेको छ । एमालेको मत दोस्रो छ ।
सधैँको चुनावमा बाटोकै आश्वासन
सुनसरीको देवानगञ्ज र हरिनगरा गाउँपालिका कृषि उत्पादनमा जिल्लामै अब्बल क्षेत्र हो । त्यहाँ बिषेशगरि तरकारी उत्पादन हुन्छ । देवागनञ्ज गाउँउपालिका (साहेबगञ्ज, कप्तानगञ्ज मध्यहर्षायी र देवानगञ्ज) मा उत्पादन भएको तरकारी देशका विभिन्न स्थानमा पुग्छन् । त्यहाँका हरेक किसानले तरकारी खेती गर्छन् तर त्यहाँ उत्पादन भएको तरकारी बजारसम्म ल्याउन समस्या छ । इनरुवा कप्तानगञ्ज सडक निर्माण गर्ने सपना २०४८ सालदेखि नै उम्मेदवारहरुले बाँडेका हुन् तर अहिले पनि सो सडक बन्न सकेको छैन । कागजी रुपमा कालोपत्रे भइसकेको सो सडकमा अहिले पनि वर्षाका बेला हिलोका कारण हिड्न नसकिने हुन्छ भने हिँउदमा धुलोका कारण हिड्न नसकिने हुन्छ । सबै दलहरुले सपना बाँडेरै चुनाव जिते ।
कागजी रुपमा इनरुवा कौवाखोच सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । तर यथार्थमा भने अझै हिलाम्मे र धुलाम्मे सडकमा यात्रा गर्न बाध्य छन् सुनसरीको कोर मधेसका जनता । कांग्रेसले धेरै पटक निर्वाचन जितेको यो क्षेत्रका बासिन्दाको सडकको सपना कहिल्यै पुरा भएन । इनरुवा कौवाखोच सडक कालोपत्रे गर्न भनेर धेरै दलले चुनावका बेला एजेन्डा बनाए तर बाटो कहिलै बनेन ।
सुनसरी कप्तानगञ्जका किसान अर्जुन कुमार यादब भन्नुहुन्छ ‘ढाँटेर राजनीति गर्ने नेताहरुको हामीलाई विश्वास छैन । चुनावका बेला बाटो बनाइदिने कल्र्भट हाल्दिने सपना सबैले देखाउँछन् चुनाव जितेर गएपछि कोही फर्कंदैनन् ।’ यादवले कांग्रेस र एमालले भन्दा पनि मधेसी दलहरुले मधेसीका भावना नबुझेको बताउनुभयो । इनरुवाबाट कप्तानगञ्जसम्म २३ किलोमिटर छ । देवानगञ्जबाट विराटनगरसम्म जान पनि २० किलामिटर यात्रा गर्नुपर्छ ।
तर दुवै बाटोे कालोपत्रे गरिदिने सपना उम्मेदवारहरुले २०४८ सालदेखि नै देखाँउदै आएका छन् । उक्त बाटो कालोपत्रे भए त्यहाँ उत्पादन भएका कृषि उत्पादनले भाउ पाउने किसानहरुले बताए । दक्षिणी क्षेत्रमा तरकारी मात्रै नभएर दुध समेत उत्पादन हुन्छ । धान र मकै उत्पादनका हिसाबले पनि उक्त क्षेत्र अब्बल मानिन्छ तर बाटो नभएका कारण यहाँको उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन ।
यस्तो छ चुनावी अंक गणित
सुनसरीको कोर मधेस निर्वाचन क्षेत्रका हिसाबले २, ३ र ४ नम्बरमा पर्छ । तिमध्ये धेरै क्षेत्र २ नम्बरमा पर्छ । त्यसपछि चार र तीनमा समेत सुनसरीको कोर मधेसको क्षेत्र छ । तीन नम्बरमा कोर मधेस परेपनि त्यहाँ थारु समुदायकै मत बढी छ । थारु समुदाय रहेको तीन नम्बरमा कांग्रेस र वाम गठबन्धन दुवैले थारु नेता नै उम्मेदवार बनाएकाले एमाले र कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा हुने मतदातामा बिश्वास छ ।
सुनसरी ३ मा वाम गठबन्धनबाट भगवती चौधरी र कांग्रेसबाट विजय गच्छदार चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ । सुनसरी ४ मा भने वाम गठबन्धनबाट रमेश श्रेष्ठ र कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको उम्मेदवारी परेको छ । राजपाले सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट सिताराम पोदारलाई मैदानमा उठाएको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले २ वटा संविधानसभाको चुनाव जितेको भए पनि त्यहाँ फोरम नेपालले प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार उठाएको छैन । कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मधेसवादी दलहरुको सहयोग भएको हुनाले खास प्रभाव नपर्ने देखिन्छ । राजपाले कमजोर उम्मेदवार उठाएकाले पनि त्यहाँको प्रतिस्पर्धा मुख्यतः कांग्रेस र वाम गठबन्धनकै बिचमा हुने देखिन्छ ।
सुनसरी २ मा वाम गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका डम्बरु सुवेदी हिमाललाई उम्मेदवार बनाएको छ भने कांग्रेसका तर्फबाट सिताराम मेहता उम्मेदवार बन्नु भएको छ । सोही क्षेत्रबाट संघीय समाजवादी फोरम नेपालकातर्फबाट तेजनारायण चौधरी र राजपाकातर्फबाट मुन्नीदेवि मेहताको उम्मेदवारी परेको छ । मुन्नीदेवि जिल्ला विकास समिति सुनसरीका पूर्व सभापति अरबिन्द मेहताकी श्रीमती समेत भएकाले पनि केहि मत उहाँका पक्षमा जान सक्ने अनुमान गरिन्छ तर यो मत कांग्रेस र एमाले भन्दा बढि हुन सक्ने सम्भावना छैन ।
चुनावी प्रचारशैली, संगठन र कार्यकर्ता परिचालनको हिसाबले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेसमा ठूलो शक्तिको रुपमा उदाएको संघिय समाजवादी फोरमको मत सुनसरी २ मा राजपा भन्दा पनि कमजोर हुने विश्लेषण गरिन्छ । मधेसको राजनीति र मधेसको माग स्थापित गर्न प्रमुख भुमिका खेलेकोमा फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादबलाई सुनसरीको कोर मधेसका मतदाता बिर्सन सक्दैनन् तर उपेन्द्रको पछि लागेका नेताहरुको व्यबहार भने सम्झन चहाँदैनन् ।
अहिलेको देवानगञ्ज देवेन्द्र दास भन्नुहुन्छ ‘मधेसवादी दलका नेताहरुको भूमिका कमजोर हुँदा यो क्षेत्रबाट मधेसवादी दलहरुले आफ्नो प्रभुत्व गुमाउँदै गएका छन् । टिकट नपाएको झाेंकमा दल बदल्ने प्रवृतिले समेत सुनसरीको मधेसमा मधेसवादी दलहरु कमजोर भएका छन । स्थानीय तहको चुनावकै बेला स्थानीयस्तरका मधेसी दलका नेता तथा कार्यकर्ता एमाले र कांग्रेसमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।